AKHRI: War-Saxaafadeed Kasoo Baxay Baanka Caalamiga Ah Ee Prmier Bank Somaliland Oo Si Toos ah Maanta Xadhiga Looga Jaray. |
AKHRI: War-Saxaafadeed Kasoo Baxay Baanka Caalamiga Ah Ee Prmier Bank Somaliland Oo Si Toos ah Maanta Xadhiga Looga Jaray.
Hargeisa, Somaliland, 25 May 2017 – Waxa uu maanta si rasmi ah Madaxweyne Ku Xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) xadhig looga jaray Premier Bank, oo ah bangi Islaami ah oo ruqsad ka haysta Baanka Dhexe ee Somaliland.
Premier Bank waa bangi xidhiidh la leh bangiyada caalamka, waxaanu rukhsad ka haystaa shirkadaha bixiya adeegyada lacag-bixinta ee ay ka mid yihiin MasterCard iyo VISA. Waxa uu sidoo kale bangigu xubin ka yahay hay’adda caalamiga ah ee SWIFT oo ah hay’ad u fududeysa bangiyada iyo sharkidaha maaliyadeed ee caalamiga ahi in ay dirista iyo helidda lacagaha.
Kasokow in uu yahay bangi dhaqan geliyey hannaanka ay ku shaqeeyaan baananka caalamiga ahi, waxa uu bangigu sidoo kale u soo kordhiyey macaamiishiisa adeegyo aan hore uga jirin dalka, oo ay ka mid yihiin in taariikhda markii koowaad uu Premier Bank MasterCard ku daabaco dalka gudihiisa, kaadhkaas oo dal kasta oo aduunka ah lagu isticmaali karo.
Himilada Premier Bank waa inuu noqdo hormuudka bangiyada. Hadafka koowaad ee Premier Bank waa in uu ka jawaabo baahiyaha maaliyadeed ee bulshada Somaliland si uu qayb laxaad leh uga qaato horumar-ka dhaqaale ee dalka. Waxa tilmaan u ah Premier Bank adeeg hufan oo danta macmiilku udub-dhexaad u tahay.
Adeegyada uu baanku bixiyaa waa kuwo haqab-tiraya baahiyaha maaliyadeed ee dadweynaha iyo ganacsatada. Waxa adeegyadaas ka mid ah furirtaanka xisaabaha socda, xisaabaha kaydsan iyo xisaabaha maalgelinta. Waxa kale oo uu bangigu qabtaa adeegyada lacag dirista, waxa uu bixiyaa warqadaha dammaanadaha, waxa uu muddo dhawna ganacsatada u furi doonaa LC-yo. Waxa macmiilka Premier Bank uu awood u leeyahay in uu xisaabihiisa lacag kala bixi karo goob kasta oo aduunka ah iyo goor kasta, isaga oo adeegsanaya kaadhka Premier Bank.
Waxa uu markii koowaad Premier Bank suurta geliyey in macmiilka Somaliland joogaa internet-ka ka iibsan karo badeecadaha iyo adeegyada uu u baahan yahay isaga oo aan cid kale culays saarin. Waxa uu baanku soo kordhiyey adeegga loo yaqaanno POS-ka oo ka fududeynaya in uu macmiilku jeebka lacag ku qaato uu wax ku iibsado.
Ugu danbeyn, Premier Bank waxa ka mid ah ujeedooyinkiisa waaweyn tayayanta, horumarka iyo daryeelka hawl-wadeennadiisa, iyaga oo laf-dhabar u ah Baanka.